Ciyaarahan Zlatan Ibrahimovic oo ka cawday habka ay saxaafada Iswiidhan ula dhaqanto | Somaliska
Nolosha / Siyaasada
Ciyaaryahanka kubbada cagta caanka ah ee reer Iswiidhan islamarkaasina asalkiiisu yahay ajanabi, ayaa cabasho ka muujiiyey habka ay saxaafadda Iswiidhan ula dhaqanto. Wareeysi uu siiyeye telefeeyshinka laga leeyahay dalka Faransiiska ee Canal+ ayuu sheegay in saxaafadda dalku aaneey ka Ibrahimovic weli aqbalin.
“Weerar ayey igu hayaan weli, maxaa yeelay ima aqbalsana ka Ibrahimovic ahaan inaan ahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee taariikhda Iswiidhan. Waxa aan sameeyeyna cid horey uma sameeyn” ayuu yiri isagoo u . waramayey Olivier Dacourt oo qudhiisa ciyaaryahan hore ahaan jiray.
Telefeyshinka Canal+ ayaa sii diiayey muuqaal horudhac ah oo ugu talaglay barnaamij lugu wado inuu baxo sanadka cusub, kaas oo uu Ibarahimovic uu ka soo dhex muuqday isagoo ka hadlaya hab dhaqanaka saxaafadda Iswiidhan.
“Rikoorka kubadda dahabka ah wuxuu ahaa labbo, ma taqaan intaan aniga heeysto kow iyo tobban kubad oo dahab ah ayaa heeystaa, weligeed horey uma dhicin wixii aan aan aniga kubadda Iswiidhan u soo sameeyey” ayuu yiri Zlatan oo aad moodo inuu careeysan yahay tusaalena ka bixinaya habka ay isaga ula dhaqanto saxaafada dalka. Ugu dambeyntiina hadalka Zlatan Ibrahimvic ayaa u muuqda in saxaafaddu ay fiirto.